हिमालयन एयरलाइन्सले सार्वजनीक गर्यो भाडा दर, कुन देशको कति ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
हिमालयन एयरलाइन्सले सार्वजनीक गर्यो भाडा दर, कुन देशको कति ?
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरेसँगै हिमालयन एयलाइन्सले नियमित उडानको तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले जारी गरेको सुरक्षा सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर सहजै पीसीआर सेवा उपलब्ध हुने गन्तव्यहरु छोड्ंछिडं, क्वालालम्पुर र आबुधावीको उडानहरु सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । यस्तै पीसीआर उपलब्ध नभएपनि सरकारले अनुमति दिए विभिन्न मुलुकमा चार्टर्ड उडानका लागि पनि तयारी अवस्थामा रहेको एयरलाइन्सले जनाएको छ ।
विदेशमा अलपत्र रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन उद्दार उडानहरुका लागि सरकारको स्वीकृतिमा भाडादर कायम गरेको बताइएको छ । नियमित उडानहरुका लागि उपलब्ध सीटहरु ग्लोबल ड्रिस्ट्रीब्युसन सिस्टमबाट पनि बुक गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । ट्राभल एजेन्सीहरुले ग्लोबल ड्रिस्ट्रीब्युसन सिस्टम ९जीडीएस० बाट सीटहरु बुक गर्न सक्ने बताइएको छ ।
गत मार्चको अन्तिम हप्तादेखि कोभिड–१९ को रोकथामका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गरेको थियो । तर विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई चार्टर उडानमार्फत स्वदेश ल्याउने कार्यलाई भने अनुमति जारी गरेको थियो । यस अवधिमा जुन १६ देखि अगष्ट ३१ सम्म ९४ वटा उद्दार उडानमार्फत १५ हजार भन्दा बढी यात्रु नेपाल फर्किएका थिए । कोभिड–१९ महामारीका कारण भएको लकडाउनले ५ महिना पछि हिमालय एयरलाइन्स्ले दुवै देशको सुरक्षा प्रोटोकल अनुसरण गर्दै आफ्नो उडान तालिका पुनः सुचारु गरेको जनाएको छ । यस्तो छ, भाडादरः
प्रकाशित मिति : भाद्र २१, २०७७ आईतबार ६ : ११ बजे